Namhansanson Fortress, Fort du Namhansanseong - Seoul
Address: 661 Sanseong-ri, Jungbu-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea Atsimo
Tsy lavitra ny renivohitr'i Korea Atsimo ny valan-javaboarin'i Namhansanson, ao amin'ny faritaniny no misy ny fiarovana ny anarana (fiarovana Namhansanseong). Toeram-ponenana manan- tantara ao amin'ny firenena ity, tafiditra ao anatin'ny taona 2014 ho UNESCO World Heritage Site.
Ny trano fitobiana dia natsangana teo an- tampon'ny tendrombohitr'i Namhansan any amin'ny 480 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Io toerana io dia nanome ny fiarovana amin'ny fiarovana azo antoka, satria talohan'ny sarotra be ny nanatratra ny fahavalo. Ny anaran'io vatolampy io dia adika hoe "ny tampon'ny Khan atsimo".
Ny trano fonenana tany am-piandohana dia naorina tamin'ny tanimanga araka ny baikon'ny Mpanjaka Onjo (mpanorina ny Baekje) tamin'ny 672 ary nantsoina hoe Chujanson. Niorina tany andrefan'ny tendrombohitra izy io ary niaro ny fanjakan'i Silla avy any Tang China. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nantsoina hoe Ilchason ilay trano. Nihanatanjaka hatrany izy io ary vita.
Ny ankamaroan'ny fort, izay tafavoaka velona amin'izao androntsika izao, dia natsangana nandritra ny fitondran'ny faritr'i Joseon. Ny fanorenana dia nanomboka tamin'ny 1624, rehefa nanambara ny ady tao amin'ny Fanjakana Shinoa Ming ny Manchus. Ny fiarovana ny Namhansanson dia nanana ny endriky tady efa ela, ary ny manodidina azy dia 12 metatra toradroa. km.
Tantara momba ny fanamafisana ny ady
Tamin'ny 1636 dia nanafika ny faritanin'ny fanjakana ny mpanamory an'i Manchu, noho izany ny Mpanjaka Injo, miaraka amin'ireo mpanafika sy miaramila (olona 13 800), dia voatery nialokaloka tany amin'ny trano mimanda. Ilay mpanjaka dia nahita fiarovan-tena mendrika, niaro azy tamin'ny moanina maherin'ny 3.000. Ireo fahavalo dia tsy afaka naka ny fiarovana ny Namhansanson tamin'ny tafio-drivotra.
Indrisy anefa, 45 andro taorian'ny nanombohan'ny fahirano, dia namarana ny fepetra ireo mpiaro. Voatery nilefitra ny mpanjaka, raha nitaky kosa ny mpanohitra fa nomen'ny mpanjaka azy ireo zanany lahy ho takalon'aina ary tsy nety nanohana ny fitondran'i Ming. Ho fahatsiarovana ireo tranga mampalahelo ho an'ny firenena, dia nisy tsangambato ho an'i Samjondo napetraka eto.
Taorian'ny nialan'ny mandan'i Manchus, dia tsy miova ny fiarovana an'i Namhansanson mandra-panjakan'ny mpanjaka Sukchon. Nifindra tany Fort Pongamson tamin'ny voalohany izy, ary avy eo - Hanbonson. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana i Enjo, dia nanavao ny trano mimanda indray izy.
Nanomboka tamin'izay fotoana izay, nanomboka niharatsy sy nihena ny trano. Tamin'ny taona 1954, noho ny lanjany ara-tantara sy ara-kolotsaina, dia nambara ho sehatra nasionaly ny faritany, ary nitarika fanavaozana lehibe ny manampahefana.
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny fiarovana an'i Namhansanson ianao dia afaka mahita ireo fiarovana natsangana tamin'ny taonjato XVII, sy fiangonana maromaro. Ny sehatr'izy ireo dia nanjary voatariky ny kolontsaina avy any Shina sy Japana . Ny tranobe malaza eto dia:
Tombon'i Cheongnyangdan - natsangana ho fahatsiarovana ny mpahay maritrano Lee Hwy. Novonoina noho ny fiampangana diso teo amin'ny fanamboarana ny faritra atsimon'ny fort izy.
Ny Pavillon Suojangdae no hany trano sisa tavela amin'ireo trano 4 ho an'ny baiko sy ny fifehezana. Eo amin'ny toerana avo indrindra ao Fortress de Namhansanson.
Ny tempolin'i Changens dia toerana masina bodista natsangana tamin'ny taona 1683. Nipetraka ireo moanina, izay nanana anjara toerana manan-danja teo amin'ny fiainan'ny trano mimanda. Any amin'ny faritry ny monastera dia afaka mianatra momba ireo hetsika sy fiainan'ny mponina ao an-toerana ianao.
Ny fitoerana masin'ny Sunnjejong - Mpanjaka Onzho dia nalevina tao amin'ilay trano. Eto, mandraka ankehitriny, izy ireo dia manao ny lanonana fanasokajiana (fankalazana ny fanaovana sorona).
Mandritra ny fitsidihana ny fiarovana ny Namhansanson, mandinika ireo tranobe toy ireto:
atsinanana, atsimo ary avaratra;
Ny departemanta fandaharana, izay manome fomba fijery mahatalanjona an'i Seoul.
Avy any afovoan-tanànan'i Seoul ka hatrany amin'ny fiarovana ny Namhansanson, dia azo tanterahana amin'ny fizahantany orina na tsy miankina amin'ny alàlan'ny bus 9403, 1117, 1650, 30-1, 9 ary 16. Ny fifamoivoizana dia miala avy eo amin'ny toeram-piantsonana Jamsil. Ny dia dia mandeha hatramin'ny 1.5 ora.
Hazo mihosin-drihitra mihetsiketsika
Ny rantsan-tànan'i Kylie Jenner dia teo an-toerana!
Ny zaza vao teraka dia manana orony
Sakafo avy amin'ny alikaola - tsara sy ratsy
Paris Hilton dia nijanona tamin'ny fiakarana tamin'ny Sinoa
Kitapo ho an'ny kambana amin'ny tananao manokana
Ny sakafo miaraka amin'ny fihenan'ny vavony
Ny rojo volamena eo amin'ny tendany
Fitafy sy akanjo anglisy
Fomba fiarovana amin'ny vohoka
Autism amin'ny ankizy
Miaraka amin'ny gelatine
Azonao atao ve ny mahazo zaza iray taona iray?
Peroxide ao anaty rano - fampiharana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Ny foibe - Resipe
Ny brassieres manosika ny banda